Dr.Haken Olive Oil - EasyAds Myanmar
Dr.Haken Olive Oil
Patheingyi Township, Mandalay.
4,500 Kyat (Fixed)
စျေးနှုန်း : 4,500 Kyat (Fixed)
Type : For Sale/ရောင်းရန်
တည်နေရာ : Patheingyi Township, Mandalay.
➡ဆံပင်အရှည်မြန်ချင်တဲ့သူ၊ ဆံပင်ကျွတ်လွန်းသူ၊ ဆံပင်ကြမ်းကြီးတွေ ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် အမြန် သက်သာပျောက်ကင်းဖို့ သံလွင်ဆီလေးလာပါပြီရှင်။
🔷Dr.Haken Olive Oil က အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး သဘာဝမှရရှိတဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သံလွင်သီး နဲ့ အယ်လမွန်စေ့ကို ပေါင်းစပ် အသုံးပြုထားတာကြောင့် ဆံသားများကို ပုံမပျက်ဘဲ လှပစေပြီး ကြာရှည်ခံစေပါသည်။ ဆံသားများ အတွက် လိုအပ်သော ဗီတာမင်ဓာတ်နှင့် သံလွင်ဆီတို့ ပါဝင်မှုကြောင့် ဆံသားမွဲခြောက်ခြင်း၊ နှစ်ခွဖြစ်ခြင်း နှင့် ဆံသားပျက်စီးခြင်းတွေကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။🔷
✔စေးကပ်မှု မရှိ၊ အနံသင်းသင်းလေးနဲ့ အရမ်းကောင်းတဲ့ Dr.Haken Olive Oil
✔ထုတ်ပိုးမှု ပုံစံကွာလတီကလည်း လှတယ်နော်။👍
🔹နှုတ်ခမ်းသားတွေ မည်းတာ အရေခွံလန်တတ်တာတွေ အမြဲဖြစ်တတ်တဲ့သူဆို ညမအိပ်ခင် သံလွင်ဆီလိမ်းအိပ်ပါ။ နှုတ်ခမ်းပေါ် အစက်ကလေးတွေချပြီး နှုတ်ခမ်းသားထဲထိ စိမ့်ဝင်အောင် ပွတ်လိမ်းပေးပါ။
🔹အမာရွတ်တွေ အကြောပြတ်တာတွေ အပေါ်မှာ သံလွင်ဆီပုံမှန်လိမ်းပေးရင် အကြောပြတ်အရာများ တဖြည်းဖြည်း အရောင်ဖျော့ဖျော့ပြီး ပါးပါးသွားတတ်ပါတယ်။
🔹ဒူးမဲ တံတောင်မဲတွေ သံလွင်ဆီ ပုံမှန်လိမ်းပေးပါ။ အမြန်ပျောက်ချင်ရင် ညမှာ သံပုရာသီးနဲ့ ပွတ်လိမ်းပေး မနက်ကျ ရေဆေးချပြီး သံလွင်ဆီလိမ်းထားပေးပါ။
🔹မျက်လုံးတဝိုက် လိမ်းပေးထားရင် မျက်ကွင်းညိုတာတွေ ပျောက်ပါတယ်။
🔹ခေါင်းမလျှော်ခင် ဆံပင်တွေကို သံလွင်ဆီ နှံ့အောင်လိမ်းပြီး နာရီဝက်လောက်ထား၊ ပြီးရင် ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ လျှော်ပေး၊ ရေဆေးချ၊ ပထမတခါက အမြုပ်မထွက်ဘူး။ ရေပြောင်အောင်ဆေးပြီးမှ ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ တစ်ခါပြန်လျှော်။ သံလွင်ဆီနဲ့ဆို Conditioner မလိုပါဘူး။ သုံးရင်လည်းရပါတယ်။
➡သံလွင်ဆီ ကို ပုံမှန် သုံးစွဲပေးခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ကတော့……
👉လက်သည်း ခြေသည်း လေးတွေကို သံလွင်ဆီ ပါးပါးလေး လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် လက်သည်း ခြေသည်းများ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး အရှည်မြန်စေပါတယ်။
👉ဆံပင်အရှည်လုံးဝမြန်ပြီး ဆံသား ကောင်းစေပါတယ်နော်။
Price – 4,500 kyats
ဒီလို အဖက်ဖက်က အသုံးဝင်နေတဲ့ Dr.Haken Olive Oil လေးကို တစ်ဘူးလောက်တော့ ဝယ်ထားသင့်တာမို့ မင်မင်တို့ရဲ့ Messenger ကို အမြန် Hi လိုက်ပါတော့နော်။
#Pageအသစ်လေးစဖွင့်တဲ့အထိမ်းအမှတ် အနေနဲ့ Opening Promotion အနေနဲ့…..
🔹မင်မင်တို့ ဆီက နှစ်သက်ရာ ပစ္စည်း​တွေကို 20,000 ဖိုး ဝယ်ယူသူတိုင်းကို 2% discount လျှော့ပေးသွားမှာ ဖြစ်လို့ ကာကာလေးတို့ ဝယ်ယူရတာ စိတ်ကျေနပ်စေမှာပါနော်။🔹
✔Mdy နဲ့ YGN ဆို အိမ်အရောက် ငွေချေ ရပါတယ်ရှင့်။ မြို့နယ်အလိုက် ပို့ခလေးတွေတော့ မတူပါဘူးနော်။
✔နယ်ဆို သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြို့နယ်လေးတွေလည်း အိမ်အရောက် ငွေချေ ရပါတယ်ရှင့်။
✔ကျန်မြို့များ အတွက်ကတော့ ငွေကြိုလွဲှ၊ ကားဂိတ် ချပေးပါတယ်ရှင့်။ ဂိတ်ချခ 1,000 ပိုယူပါတယ်နော်။
🔹အကယ်၍ ကာကာလေးတို့က Banking, K Pay နဲ့ ငွေကြိုလွဲှချင်တယ် ဆိုလည်း ရပါတယ်ရှင်။ K Pay % ပေးစရာ မလိုပါဘူးရှင့်။
#OnlineShopသီးသန့် ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဆိုင်ဖွင့်မထားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Customers လေးများက Deli နဲ့ မယူဘဲ အိမ်သို့ လာရောက် ဝယ်ယူမည် ဆိုပါက နာမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ဝယ်ယူလိုသည့် ပစ္စည်း၊ ငွေပေးချေမည့် နည်းလမ်း၊ စတာတွေကို တစ်ရက်ကြိုပြီး အကြောင်းကြားပေးပါနော်။ မင်မင်တို့ ပစ္စည်း ရှိ၊ မရှိ အကြောင်းပြန်ပေးထားပါမယ်။
Magic Shop Beauty Care
Ad Type: For Sale/ရောင်းရန်
Fashion, Beauty & ClothingUnisex
Etude Pore Scrub Baking Powder PC
600 Kyat (Fixed)
Etude Pore Scrub Baking Powder Box
13,500 Kyat (Fixed)
Patheingyi Township, Mandaly.
BP Tomato Body Serum
8,000 Kyat (Fixed)
6,000 Kyat (Fixed)
Cathy Doll Aloe Toner & Essence
9,500 Kyat (Fixed)
Nami Peach Gluta Soap
3,500 Kyat (Fixed)
AR Vitamin E Cream
3,200 Kyat (Fixed)
Panda Crystal Eye Mask
5,000 Kyat (Fixed)
AR Avocado Oil Control Facial Foam
V7 Roll on
1,600 Kyat (Fixed)
#DrHAKENOliveOil DR.HAKEN Olive Oil➡ဆံပင်အရှည်မြန်ချင်တဲ့သူ၊ ဆံပင်ကျွတ်လွန်းသူ၊ ဆံပင်ကြမ်းကြီးတွေ ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် အမြန် သက်သာပျောက်ကင်းဖို့ သံလွင်ဆီလေးလာပါပြီရှင်။ 🔷Dr.Haken Olive Oil က အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး သဘာဝမှရရှိတဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သံလွင်သီး...